Dowladda Federalka oo qorsheyneysa iney la wareegto amniga ilaalada xeebaha dalka – Somali Top News
September 19, 2019 Somali Top News	0 Comments Dowladda Federalka oo qorsheyneysa iney la wareegto ilaalada xeebaha dalka
Aqoon is weydaarsi looga hadlayey sidii loo heli lahaa Ciidan Boliis ah oo awood u leh ilaalinta Xeebaha Dalka, ka hortagga Tahriibka, isku socodka kooxaha Argagaxisadda iyo kuwa ka ganacsadda waxyaabaha maanka dooriya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Wasaaradda amniga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, waxaana ka qeyb galay Saraakiil ka socotay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta ilaalinta Xeebaha Dalka, maamul Goboleedyada, wakiillo ka socda Dowladaha Soomaaliya ka taageera Boliiska, UNSOM, UNPOL iyo AMISOM.
Isku duwaha Xafiiska Ciidanka ilaalinta Xeebaha ee Wasaaradda amniga, Muntaasiya Xaaji Jimcaale ayaa sheegtay in ay muhiimad gaar ah leedahay ilaalinta Xeebaha Dalka, Ciidanka la unkayana uu wax weyn ka tari doono ka hor tagga dembiyada ka dhaca Badaha Soomaaliya.
Taliyaha laanta ilaalada Xeebaha ee Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, G/dhexe, Bashiir Cabdi Isaaq, ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo aas-aaska Ciidan Boliis oo awood u leh difaaca iyo ilaalinta Xeebaha Dalka, wuxuuna intaa raaciyay in halistii xagga berriga ay ku biirtay dhibaato kale oo ka jirta dhanka Badda, taas oo u baahan in wax laga qabto.
← Jubbaland oo soo saartay war-saxaafadeed ay uga hadleyso dagaal iyo duulaan ay ka cabsi qabto
Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka oo la kulmay Guddoonka Baarlamaanka Puntland →
DF oo digniin iyo amaro dul dhigtay maamulka Jubbaland
October 6, 2019 Somali Top News 0
Ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo markale ka hadlay maqaamka Muqdisho
August 11, 2019 Somali Top News 0
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Shir-Gudoomiyay Kulanka Tubta Siyaasadda Loo Dhanyahay